दिनेश डिसीको खुलापत्र – ‘जवाफ दिनुहोस् बाबुरामजी’ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
दिनेश डिसीको खुलापत्र – ‘जवाफ दिनुहोस् बाबुरामजी’
विश्व भर रहेका धेरै नेपालीले जनवरी १ लाई टोपी दिवसका रुपमा मनाउँदा तपाईलाई टाउको किन दुख्यो ? तपाईले ट्वीट गरेजस्तो हामीले टोपी दिवस मनाउँदा बहुजातीय,बहुसांस्कृतिक सोंचलाई कहाँनिर ठेस पुग्यो ? टोपी दिवस मनाउंदा बहु सांस्कृतिक भावमा चोट पुग्छ भने त ल्होसार, छठ, दंशै, तिहार, होली,शिवरात्रि, सरस्वती पूजा, ईद, तिज, क्रिसमस, ऊधौली,म्ह पुजा,महावीर जयन्ति(जैन) ,स्वस्थानी, गुरुनानक जयन्ति, फाल्गुनन्द जयन्ति, जनै पुर्णीमा, गठे मंगल त केही मनाउनै भएन ।
कुनैबेला भूमिगत हुंदा बाबुरामजी तपाईले गाई काट्न प्रेरित गर्नुभयो । देउता नमान्न र दंशै तिहार समेत नमनाउन नेपालीलाई प्रभावमा पार्नुभो । तर भूमिगत जीवन त्याग्नसाथ पहिला आफ्नो वुवा आमालाई मनोकामना भगवति दर्शन गराउन लानु भो । र दंशैमा आफ्नो बुवासंग टिका लगाएको फÞोटो सार्वजनिक गर्नुभो । तर पनि हामी बोलेनौं । किनकि तपाईमाथि त्यो बेला जनताको आशा थियो ।
बाबुरामजी , टोपी दिवस त स्वत स्फूर्त मनबाट उठेको भावना हो । उहीले तपाईको पार्टीले जवरजस्ती नेपाल बन्द गराए जस्तो होइन । शास्त्र, संस्कार र संस्कृतिले पहीचान दिन्छ । टोपी मात्र होईन फेटा पनि हाम्रै हो । मुसलमान दाजुभाईको तागीया टोपी होस् वा पगरी छतरी वा गम्छा वा तामाङ र शेर्पाको फरक सरपोश ।सवै नेपालको हो र सवै नेपालीको पहिचान हो । सुरूवाल मात्र होइन, धोति र कछाड पनि हाम्रो हो । चौवन्दी , हाकुपटासी ,बख्खु पांगदेन,मेख्ली,गुन्यू,फरिया र पटुकी हाम्रै हुन् । यी सब हाम्रा पहिचान हुन् । हामी सवैको पहीचानको सम्मान गर्छौ र संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं ।
म यस्तो लेख्नु परेकोमा माफी चाहन्छु । तर पहिचानको नाममा जाति, धर्मबीच, क्षेत्रबीच विवादको विष रोपेर राजनीति गरेर आज देशलाई मुडभेड र विखण्डनको मुखमा पुराउने नेताहरू मध्ये एक तपाई पनि हुनुहुन्छ । तपाईले भारतीय अघोषित नाकाबन्दी पछि विभिन्न विषयमा दिंदै आउनु भएको अभिव्यक्तिले तपाईमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बाबुरामको यसबारेको ट्वीट पढ्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूले वेस्ट र नर्थ बंगाल भ्रमणमा नेपाली मुलका भारतीयहरूले उपहार स्वरूप दिएको नेपाली ढाका टोपी र खुकुरी क्रस सहीत भादगाउँले टोपी लगाएर कहाँ कहाँ र कसकसलाई चोट पुराए ? जवाफ दिनुहुन्छ कि ? उहाँबाट हामीले जे राम्रा कुरा सिक्नु पर्ने हो, त्यो खुल्लम खुल्ला सिकौं । जे सिक्नु हुंदैन,त्यो खुसुक्क सिक्न छोडौं ।
(डिसी नेपालका चर्चित संचारकर्मी तथा रंगकर्मी हुन् । )